Nederland waxay raadinayaan inay u oggolaadaan kiniinka halista ah ee waayeelka.
Inicio/Ciencia/Waxay raadinayaan inay u oggolaadaan kaniin dilaa ah dadka waaweyn ee ka weyn 70 jir, kuna daalay nolosha.
0 3.078 2 daqiiqo akhri
Kiniinka halista ah ee waayeelka.
Daraasad muran badan dhalisay oo ku saabsan kiniinka dilaaga ah ama kan isdilka ah ee ay dhiirrigelisay Dowladda Holland ayaa soo saartay khilaaf xoogan Kaalmada suurtagalka ah ee ay siinayso dadka waayeelka ah, si ay noloshooda ugu dhammeeyaan kiniin loo yaqaan euthanasia dilaa ah.
Euthanasia ama caawisay ismiidaaminta, mararka qaarkoodna labadaba, waxaa laga sharciyeeyay tiro yar oo Nederland ah tan iyo 2002, laakiin waxaa kaliya laga heli karaa xaaladaha silica daran ama jirrada aan dhamaadka lahayn waxaana go'aanka saxiixay 2 dhakhtar oo madax banaan. Dhamaan awoodaha, sharciyada iyo ilaalinta ayaa loo sameeyay si looga digo ku xadgudubka iyo ku takrifalka dhaqamadaas. Tallaabooyinka ka-hortagga ayaa lagu daray, kuwo kale, oggolaanshaha cad ee qofka codsanaya euthanasia, xiriirka khasabka ah ee dhammaan kiisaska, maamulka oo keliya dhakhaatiirta (marka laga reebo Switzerland) iyo la-tashiga ra'yi caafimaad oo labaad.
Nederland waxay raadineysaa inay ansixiso kaniin halis u ah kuwa ka weyn 70
Dawladdu waxay dhowaan daabacday sahan ku saabsan baaxadda dadweynaha ee habkan ismiidaaminta ah loo horseeday taasna ay suuragal noqon karto 2020.
Ujeedada bilowga ah
Ujeedkii ugu horreeyay wuxuu ahaa in la xaddido euthanasia oo laga caawiyo ismiidaaminta ikhtiyaarka ugu dambeeya ee loogu talogalay tiro aad u yar oo dad ah oo aan u bogsan karin. awoodaha qaarkood ayaa hadda fidiya ku dhaqanka kiniinkan dilaaga ah ee dhallaanka, carruurta, iyo dadka waallida qaba. Cudurka joogtada ahi mar dambe shardi uma aha. Nederland sida Holland oo kale, euthanasia hadda waxaa loo tixgeliyaa shaqsi kasta oo ka weyn da'da 70 sano oo "daalay ku noolaanshaha". Sharciyeynta Euthanasia iyo caawinta ismiidaaminta, sidaas darteed, waxay dad badan gelineysaa khatar, waxay saameyn ku yeelaneysaa qiyamka bulshada waqti ka dib, mana bixineyso xakameyn. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaristiisa, waxaa sidoo kale lagu muujiyay in rabitaanka dhimashadu ay yareyn karto ama xitaa baaba'i karto marka xaaladda jireed iyo mid dhaqaale ee qofka ay soo hagaagto xitaa haddii uu iska daayo dareemo ku tiirsanaan ama kaligiis.
Anaga oo u hiilinay: QUOTE laga soo xigtay MP Pia Dijstra, oo ka tirsan xisbiga liberalka D66:
Waxay ku doodeysaa "dadka waayeelka ah ee cimriga dheer qaatay waa inay awoodaan inay dhintaan markay go'aansadaan."
Ka soo horjeedka: Haweeney ka tirsan Congress-ka QUOTE Carla Dik-Faber:
Waayeelka ayaa dareemi kara wax aan loo baahnayn bulshada aan qiimeynin da'da. Waa run inay jiraan dad dareemaya cidlo, kuwa kale waxaa laga yaabaa inay nolol rafaadsan ku jiraan waana arin aan sahlaneyn in la xaliyo, laakiin dowlada iyo bulshada oo dhan waa inay xil iska saaraan. Dooni meyno la taliyeyaal dhamaadka nolosha ah, waxaan rabnaa 'hagaha nolosha'. Anaga ahaan, nolosha oo dhami waa noo qiimo. "
Euthanasia ee waayeelka ayaa sii ahaan doonta dhibaato caafimaad oo weyn. Waxay ka dhigan tahay dadaal badan oo ku saabsan daryeelka bulshada, caafimaadka maskaxda, maalgelinta iyo dadaallada sharci dejinta waa inay diiradda saaraan kooxdan da'da si loo yareeyo masiibadan la saadaalin karo dhamaadka nolosha.
Adiguna, maxaad ka aaminsantahay kiniinka halista ah?
Caqli macmal ah oo lagu ogaan karo cudurada.
UCID euthanize dadka waayeelka ah kiniin isdila kiniiniga 'euthanasia' kiniin isdila kiniin dilaa ah
Youtuber reer Mexico ayaa lagu xukumay xabsi, 50 sano afduub
Mashruuca sawir qaadista ah ee muujinaya xaqiiqda cuntadeena.
Majaajiliistaha kaftanka - Sheekooyinka kaftanka ugu fiican
Khiyaanooyinka hackkuwa ugu caansan adduunka.
Ma basaasayaan telefoonkaaga? Shabakada Ilaalinta Mass Mass
Xiisaha ku saabsan Websaydhka Madoow (Deep Web)
Wuxuu ku xayiray guriga walaashiis oo u dhimatay cudurka Coronavirus